Oke mmiri ozuzo nwere ike ibilite na Spain? | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ bụrụ na ịchọrọ oke mmiri ozuzo, ị ga-achọ otu ka ọ dịrị na Spain, nri? Ma ọ bụ na mgbe ịmara na na United States ihe dị ka 1000 nke oke ikuku ndị a dị egwu na-etolite kwa afọ, na-eme ka ịchọrọ ịzụta tiketi ụgbọ elu El Corredor de los Tornados naanị iji tụgharịa uche na ha, ọbụna otu ugboro.
Mana, ọ bụ ezie na mba anyị, ọnọdụ kachasị mma adabaghị iji hụ EF5, ee ị ga - ahụ oke mmiri ozuzo na Spain. Ihe siri ike ịmata ebe na mgbe.
Na ihe bụ, a phenomena nwere ike ime n’oge ọ bụla n’afọ, ha nwekwara ike ịpụta ma n’ehihie ma n’abalị; nke ahụ bụ, mmadụ nwere ike iju anyị anya n’oge ọ bụla. N'ezie, dị ka data si AKEMKỌ, na Spain ha na-eme ugboro ugboro n'etiti ọnwa nke Septemba ruo Disemba, na elekere ehihie.
Na mba anyị ọ na-esiri oke mmiri ozuzo ike ịmalite na United States. N'ezie, ọ bụ naanị ndị dị n'etiti EF0 na EF3 na ebe dị iche iche na ọkara ala nke peninshula, na na ọwụwa anyanwụ nke obodo tinyere Balearic Islands.
Oke mmiri ozuzo akụkọ ihe mere eme na Spain
Oke ikuku mmiri kachasị mkpa hụrụ na mpaghara Spanish bụ nke otu EF3, na ha mere na ebe ndị a:
Cádiz, na 1671
Madrid, na 1886
Seville, na 1978
Ciutadella-Ferreries (Balearic Islands), na 1992
Navaleno-San Leonardo de Yagüe (Soria) na 1999
Ifufe sitere na oke ifufe EF3 na-efe ọsọ ọsọ n'etiti 219 na 266km / h, na nwere ike imebi ezigbo ihe. Ọ nwere ike ịkwatu ụgbọ oloko, bulie ụgbọ ala dị arọ ma tụfuo ha, mebie ihe owuwu nwere ntọala na-adịghị ike, yana ịhapụ ọnwụ.
Yabụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ otu, ọ ga-anọrịrị nso - ka ọ ga - aka mma - maka na ọ bụrụ na anyị emeghị, anyị nwere ike inwe ọtụtụ nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe ikuku » Oke mmiri ozuzo nwere ike ibilite na Spain?
Kedu ihe ọkụkụ kachasị ogologo na nke kachasị ogologo na akụkọ ntolite?